Antakya wuxuu soo qaadaa Gawaarida Cable dhamaadka sanadka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean31 HatayAntakya Oo Kusoo Kicinaysa Baabuurta Cayaaraha Dhamaadka Sanadka
23 / 07 / 2012 31 Hatay, GUUD, Gondola, TELPHER
Waddada laga furi doono inta u dhaxaysa Habib-i Neccar Mountain iyo Uzunçarşı ee Antakya ayaa la geyn doonaa ilaa adeegga ilaa dhammaadka sanadka.
Iyadoo kun mitir 100 ee baabuurta cable, magaalada ayaa laga arki karaa hawada. Booqashooyinka buurta sare leh ee baabuurta fiilada ayaa fursad u leh in ay isticmaalaan goobaha daawashada ee halkaas. Gawaarida telefishinka, oo raaci doona waddada dhismooyinka taariikheed ee Antakya, ayaa celcelis ahaan u qaadan doona 1,000 qof 200 saacaddii. Duqa magaalada Antakya Lütfü Savaş, sababo la xiriira burburkii taariikhiga ah ee buurta sababtoo ah go'aanka waxaa laga filayaa Guddiga Maareynta, guddiga ayaa bilaabi doona inuu shaqeeyo illaa dhamaadka sanadka haddii caqabad, ayuu yiri.
Dagash Ujeedadeenu waa inaanu dadka halkaas ku socono oo aan wax ku biirino dukaanka
Dhawridda dhererka wadada ayaa noqon doonta kun mitir 100, ayuu yiri Saalax, "6,5 ayaa lagu sii deyn doonaa daqiiqado kadibna 6,5 ayaa ku dhex socon doonta daqiiqado. Marka wadarta safarka waxay noqon doontaa daqiiqado 13. Laakiin haddii aan samayno kafateeriyada quruxda badan, kooxaha ciyaaraha caruurta iyo makhaayadaha kor ku xusan, martidadayadu waxay heli doonaan fursad ay ku helaan madadaalo oo ay lacag ku qaataan. "
Duqa magaalada Lutfu Saalash ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay u guuraan xaalad weyn oo magaalada ah oo ay ku dheheen: Inaan sameyno shaqo badan oo ku yaala Antakya muddada gaaban, oo leh tas-hiilaad aad u wanaagsan oo ku yaal magaalada caasimadda, wax badan ayuu qabanayaa. Wax badan ayaan ku sameynay xarumaha xaddidan. "
Waxaa laga badbaadiyay haraaga bullaacadaha ee labada dhinac ee Aasiga River ee u socdaalaya dhulalka, waxayna tilmaamayaan in ay sameeyaan raadin socod ah, ka hor bisha Janaayo si ay u soo dejiyaan doonnida webiga ee doonnida ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan in ay guursadaan.
Waxay sheegtey in ay dejiyeen nadaamka biyaha lagu hayo biyaha wabiga ee doonnida gawaarida, ayuu yiri Saalax, waxaanu biyo ka soo qaadnay dhirta daaweynta waxaanan siinaa Asi hoose ee matxafka. Biyaha ayaa kor uga qaadi doona webiga. Waxay u egtahay biyaha ka sarreeya korka waxayna kor u qaadi doontaa biyaha marka biyuhu hooseeyaan xagaaga .. Antakya Prime Mall, sida mid ka mid ah labada xarumood ee dukaamada Odabaşı, oo loo yaqaan 'Akish Antakya' ayaa bixiyay macluumaad, ayaa u sheegay in magaaladu ay bedeshay qolofka.
Madaxweynaha Soomaliya wuxuu mashaariicihiisa u sharaxay sida soo socota: "Dhismayaasha baabuurta cusub ee cusub ayaa socda. Qalab isboorti oo weyn ayaa lagu dhisay xaafadda Altinçay. Iyada oo xadiiqadda 23 cusub, tirada beeraha ee magaalada ayaa kor u kacay 71. Waxaan qaadnaa suuqa xayawaanka, gawaarida iyo rooga ka baxsan magaalada. Garoonka waxaa loo wareejin doonaa meel cusub oo ku taal bannaanka. Duqa magaalada Mayor Lütfü Sucas ayaa sheegay in ay furi doonaan xarun bulsheed ee degmada Habib-i Neccar Mountain, waxaana uu sheegay in saxafiyiinta gudaha Antakya ay halkan u adeegi doonaan.
Warqad ku saabsan in cunnada ay Antibiotku tahay dhaqan ay tahay in la ilaaliyo, Sucaad ayaa sheegay in magacaabista UNESCO ee 'City Gastronomy City' la aqbalay. Dagas ayaa sidaas yidhi, waxaan ku shaqeyneynay laba sano. Waxaan ahaa musharax, hadda waxaan nahay. Haddii ay jirto fursad, haddii musharaxnimadayada la aqbalo 4 ee adduunka. Waxaan noqon doonaa meesha. 3 oo ah Magaalada City Gastronomy waxay ku taallaa; mid ka mid ah Colombia, mid ka mid ah Sweden, mid ka mid ah Shiinaha .. Waxaan rajeyneynaa inaan noqon doono kii afaraad. "
Isha laga helay: wargeyska cad
marin habaabin ah
Maanta taariikhda: 23 July 1939 Askar Faransiis ah oo ku sugan Hatay oo ka baxay iyo Payas-Iskenderun Bugün
Xalka Wareegga Loogu Talagalay Xadiiqada Olombikada Summer 2012 ee London